Ndege yeBelavia ine injini yakundikana inoita kumhara kwechimbichimbi muMoscow
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Airlines » Ndege yeBelavia ine injini yakundikana inoita kumhara kwechimbichimbi muMoscow
Airlines • nhandare yendege • Belarus Kuputsa Nhau • Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • nhau • Russia Kuputsa Nhau • chengetedzo • ushanyi • kutakura • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • Akasiyana Nhau
Ndege yeBelarusian yakakwira kuMoscow's Domodedovo Airport ine injini imwechete yekushandisa.
Ndege yeBoeing 737 yaishandiswa neBelavia yakatumira chiratidzo chekukurumidzira pamusoro peRussia.
Belavia mutyairi jet aive munzira kubva kuMinsk kuenda kuAntalya, Turkey.
Kune 197 vafambi nevashandi vanomwe vari mungarava yeBelavia.
Boeing 737 mutakurwi jeti inoshandiswa neiye Belarusian mhepo inotakura Belavia, iyo yaive munzira kubva kuMinsk, Belarus kuenda kuAntalya, Turkey, yakaita kumhara kwechimbichimbi pa Moscow Domodedovo Airport mushure mekutumira chiratidzo chekukurumidzira pakati pendege.
"Ndege yeBelavia B29215 iri munzira kubva kuMinsk kuenda kuAntalya yasvika zvakanaka kuDomodedovo," vakuru veRussia vanoona nezvekufamba nendege vakadaro.
Sekureva kweshumo, ndege yeBelavia yakamhara kuDomodedovo Airport ine injini imwe chete inoshanda.
NeMuvhuro, Belavia Boeing 737 ndege yevatakurwi iri munzira kubva kuMinsk kuenda kuAntalya yakatumira chiratidzo chekukurumidzira ichibhururuka pamusoro peBelgorod Dunhu muRussia Federation.
Ndege yaipfuura neUkraine, uye mushure mekutumira chiratidzo chekutambudzika, yakadzika ndokuchinja nzira kutanga kuVoronezh uyezve kuMoscow.
Kune 197 vafambi nevashandi vanomwe vari muchikepe.
Pakanga pasina mishumo yekufa kana kukuvara mushure mekumhara kwechimbichimbi.